Inqubomgomo Yemfihlo Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngenhloso yokuhlinzekwa koMthetho oshiwo ngenhla wokuvikelwa kwedatha yomuntu siqu, imininingwane oyithumelayo izofakwa kufayela "LABASEBENZISA IWEBHSAYITHI NABABHALISILE", eliphethwe yi-Online SL. Leli fayela selisebenzise zonke izindlela zokuphepha zobuchwepheshe nezenhlangano ezisungulwe kuRoyal Decree 1720/2007, ekwakhiweni kwe-LOPD.
Ukuthumela idatha yomuntu siqu kule webhusayithi kuyimpoqo yokuxhumana, ukuphawula, ukubhalisela abalandeli be-blog.online, ukwenza izinkontileka ngezinsizakalo eziboniswe kule webhusayithi futhi uthenge izincwadi ngohlobo lwedijithali.
abalandeli.online izoqoqa idatha yomuntu siqu yabasebenzisi, ngamafomu online, nge-Intanethi. Imininingwane yomuntu eqoqiwe, ngokuya ngecala ngalinye kungaba, phakathi kwabanye: igama, isibongo, i-imeyili kanye nokuxhumeka kokufinyelela. Futhi, esimweni sezinsizakalo zokuthola izinkontileka, ukuthenga izincwadi nokukhangisa, ngizocela umsebenzisi imininingwane ethile yasebhange noma yokukhokha.
Ukuphendula izidingo zomsebenzisi: Isibonelo, uma umsebenzisi eshiya imininingwane yakhe kunoma yimaphi amafomu wokuxhumana, singasebenzisa leyo datha ukuphendula isicelo sakho futhi siphendule kunoma yikuphi ukungabaza, izikhalazo, ukuphawula noma ukukhathazeka okungavela. unemininingwane ngemininingwane efakwe kwiWebhusayithi, izinsizakalo ezinikezwa ngeWebhusayithi, ukucubungulwa kwemininingwane yakho yomuntu siqu, imibuzo ephathelene nemibhalo esemthethweni efakwe kwiWebhusayithi, kanye neminye imibuzo ongahle ube nayo.
Ukuze ulinganise futhi uphendule imibono eyenziwe ngabasebenzisi kubhulogi.
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezidingeka kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wayo, i-Online SL yabelana ngemininingwane nabahlinzeki abalandelayo ngaphansi kwezimo zabo zobumfihlo ezihambisanayo.
Izinhlelo zokuthwebula imininingwane yakho esetshenziswa abalandeli.online :
Lapho usebenzisa izinsizakalo zesikhulumi se-imeyiliChimp sokwenza imikhankaso yokuthengisa ngama-imeyili, ukuphatha okubhaliselwe nokuthumela izincwadi, kufanele wazi ukuthi I-MailChimp Inamaseva ayo asingethwe e-US ngakho-ke idatha yakho yangasese bazodluliselwa emhlabeni wonkana ezweni elibhekwe lingaphephile ngemuva kokuchithwa kwe-Safe Harbour. Ngokwenza ukubhaliswa, wamukela futhi uvuma idatha yakho egcinwe yingxenyekazi ye-MailChimp, ese-United States, ukuphatha ukuthunyelwa kwamaphephandaba ahambisanayo. Imeyilichimp iguqulwa ezigabeni ezijwayelekile ze-EU zokuvikelwa kwedatha.
Ukuthengiswa kwezincwadiNgengosi ungathenga ukushicilelwa kanye nemibhalo engezansi ye-Online SL, kulokhu, idatha yomthengi (Igama, isibongo, nenombolo yocingo, ikheli leposi ne-imeyili) kuyadingeka ngokusebenzisa ipulatifomu ye-Paypal njengendlela yokukhokha .
Abasebenzisi bangakwazi Zikhiphe ohlwini noma kunini yezinsizakalo ezinikezwa ngabalandeli.ixhumanisa ku-Newsletter efanayo.
Ku- followers.online sibuye sifunde okuthandwa ngabasebenzisi bayo, izici zabantu, izindlela zabo zethrafikhi, nolunye ulwazi ndawonye ukuqonda kangcono ukuthi zingobani izilaleli zethu nokuthi zidingani. Ukulandela izintandokazi zabasebenzisi bethu kusisiza nokuthi sikubonise izikhangiso ezifanele kakhulu.
Umsebenzisi futhi, ngokujwayelekile, noma yimuphi umuntu wemvelo noma wezomthetho, angakha i-hyperlink noma i-technical link yedivayisi (ngokwesibonelo, izixhumanisi noma izinkinobho) ezisuka kuwebhusayithi yazo ziye kubalandeli.online (i- "Hyperlink"). Ukusungulwa kwe-Hyperlink akusho ukuthi kunoma ikuphi ubukhona bobudlelwano phakathi kwabalandeli.online nomnikazi wesayithi noma ikhasi lewebhu lapho i-Hyperlink isungulwe khona, noma ukwamukelwa noma ukwamukelwa ngabalandeli.online kokuqukethwe kwayo noma izinsizakalo. Kunoma ikuphi, abalandeli.online banelungelo lokuvimbela noma ukukhubaza noma iyiphi i-hyperlink eya kuwebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi.
Abasebenzisi bangakwazi Zikhiphe ohlwini noma kunini nezinsizakalo ezinikezwe abalandeli.online Newsletter efanayo.
Umsebenzisi uqinisekisa ukuthi idatha yomuntu siqu enikezwe ngamafomu ahlukile iyiqiniso, ebophezelekile ukuxhumana nanoma yikuphi ukuguqulwa kwayo. Ngokunjalo, uMsebenzisi uqinisekisa ukuthi lonke ulwazi olunikeziwe luhambelana nesimo sabo sangempela, ukuthi sisesikhathini futhi sinembile. Ngaphezu kwalokho, uMsebenzisi uthembisa ukugcina idatha yakhe ivuselelwa ngaso sonke isikhathi, ebhekele kuphela ukunganembi noma ukuqamba amanga kwedatha enikeziwe kanye nomonakalo ongabangelwa yilokhu ku-Online SL njengomnikazi wabalandeli bewebhusayithi.online.
Ungaqondisa ukuxhumana kwakho futhi usebenzise amalungelo finyelela, ukulungiswa kabusha, ukukhanselwa nokuphikiswa ngeposi leposi ku-. noma ku-imeyili: info (at) followers.online kanye nobufakazi obuvumelekile emthethweni, njengefothokhophi ye-DNI noma efanayo, ekhombisa esihlokweni esithi "UKUVIKELWA KWEDATHA".
Umsebenzisi uthi wazisiwe ngemibandela yokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, ukwamukela nokuvuma ukwelashwa kwayo nge-Online SL ngendlela nangezinjongo eziboniswe kusaziso somthetho.
Abakwa-Online SL banelungelo lokuguqula le nqubomgomo ukuze bayivumelanise nomthetho omusha noma umthetho nezenzo zemboni. Ezimweni ezinjalo, uMhlinzeki uzomemezela kuleli khasi ushintsho olwethulwe ngokulindela okunengqondo kokuqaliswa kwazo.
Ngokuya nge-LSSICE, i-Online SL ayenzi imikhuba ye-SPAM, ngakho-ke ayithumeli ama-imeyili ezentengiselwano angazange acelwe ngaphambilini noma agunyazwe nguMsebenzisi, kwezinye izikhathi, angathumela ukukhushulwa nokunikezwa kwawo kanye nabantu besithathu, ezimweni kuphela lapho uthola khona imvume yabamukeli. Ngenxa yalokho, kufomu ngalinye elinikezwe kwiWebhusayithi, uMsebenzisi unethuba lokunikeza imvume yakhe yokuthola "Incwajana" yami, kungakhathalekile imininingwane yezentengiso ecelwe ngqo. Ungakhansela futhi okubhalisile ngokuzenzakalela kuma-Newsletter afanayo.